UnComoHacer ▷➡️ - Isu Tinobvisa Zvese Zvako ➡️ Kupokana!
Maitiro uye Zvinodiwa
Nzira Yekuziva Ndiani Muridzi Weakaundi Yebhangi Nhamba?
Ndoziva sei nzvimbo yangu? nzvimbo yangu yazvino
Zvirongwa uye Makomputa
Mafoni uye App`s
15 Dzakanakisa dzimwe nzira dzeChatroulette
www.aka.ms/linkphone QR kodhi mukati Windows 10
Mazuva ano uzivi: maitiro, pfungwa uye vazivi
Latent heat: kuti chii, formula uye maekisesaizi
Mutemo wechitatu waNewton: Pfungwa, mienzaniso uye zviitwa
Seti dzenhamba: zvakasikwa, nhamba, zvine musoro, zvisina musoro uye zvechokwadi
Nzira yekuita sei heti inopenga? Mumaminetsi gumi chete
Zvinorevei kuona shavishavi? Zvazvinoreva maererano neruvara
Nzira Yokuita Sungano naMwari? Zvaunofanira kuziva
Ungaziva sei kuti mumwe wako ari kupi? Pasina Kuziva: 2 kubva pa3 vanhu vanosora kune vavanoshamwaridzana navo
Nzira yekuita hickey? Nzira yekugadzira pacifier
Nzira yekuziva sei kana iri goridhe? nzira dzekumba
Hutano uye Runako
Kune avo vasina ruzivo urwu, tinokuvimbisa kuti zvinokwanisika kuwana muridzi wenhamba yebhangi yebhangi, saka kana iwe uchida kuita nzira inoda ruzivo urwu, unogona kuzviita pasina kutambisa nguva :-). Izvi zvechokwadi, kana iwe uine data rekupinda webhusaiti ye… verenga zvakawanda
Dzimwe nguva tinozvibvunza mibvunzo yakadai; ndiani aisaziva kwaanogara? Identity, ugari hwemunyika uye manzwiro emunyika ndiwo maitiro anowanzo kuvandudzwa mumakore ekutanga ehupenyu. Inguva iyoyo patinofunga nezve vanhu vaya vasati vazivisa kwavanogara uye ndipo patinoona mamiriro akaita sekuchinja kwe… verenga zvakawanda
Mwari ndiye mukuru wechitendero chipi nechipi, kana ari maCatholic, kuita chibvumirano naMwari rudzi rwekuzvipira, muBhaibheri rinozivikanwa se "kusunga pamwe chete", izvi zvichireva muchato kana mubatanidzwa wepasi wevanhu vaviri . Kuita chibvumirano naMwari kunotoda kuve nekutenda... verenga zvakawanda
Mepu yeEurope Mepu yeEurope Europe ndeimwe yemakondinendi matanhatu papasi, ichiva yechipiri padiki maererano nenzvimbo yepasi, kuseri kweOceania. Iine nharaunda ye10 km498 uye huwandu hwe000 vagari, kondinendi yeEurope ine makumi mashanu nyika dzakazvimiririra. Mepu yezvematongerwo enyika yeEurope Russia iri… verenga zvakawanda
Nzira Yokuita Sei Murayiridzo?
Kune marudzi akawanda emirairo: pfupi, yakareba, yevana, yevashandi, yakadhindwa pamapepa, digital uye zvimwe zvakawanda! Asi vese vane chinhu chimwe vakafanana uye kudzidzisa mushandisi kana muverengi. Kukosha kwemirairo iri muchokwadi chekuti aya ndiwo anotitsanangurira nenzira yakajeka uye yakapusa maitiro ekuita zvimwe ... verenga zvakawanda
Linear kuwedzera ndiko kuwedzera kwevhoriyamu kunoitika mune imwe chete dimension, mukureba kwayo. Iyo yakasarudzika maitiro ezvinhu zvakasimba zvakaiswa mukupisa kwekupisa. Muenzaniso wakapfava wekuwedzera kwekupisa unogona kuonekwa panjanji. Ivo vari pasi pekupisa kwakanyanya zvakanyanya sezvo njanji dzinopfuura uye iyo… verenga zvakawanda
15 Dzakanakisa Dzimwe nzira dzeKahoot
Kana zvasvika kudzidzo yavanhu vose zvavo, nzira iyo zivo inogoverwa nayo inofanira kuva ine simba, inobatanidzwa uye inonzwisisika sezvinobvira kuitira kuti ruzivo rukwane zviri nani mumisoro yedu; Apa ndipo panopinda, muzera rino redhijitari, maturusi chaiwo akaita se Kahoot anopinda mumutambo, ayo ... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei Triptych neruoko? Dhizaini muA4
Pfungwa ye triptych inobva muunyanzvi, kunyanya unyanzvi hweFlemish munguva yezana remakore rechiXNUMX neXNUMX, iyo yaisanganisira pendi yakakamurwa kuita mapaneru, kazhinji mifananidzo mitatu yakasiyana yedingindira rimwe chete, iro pakavharwa rakaburitsa basa rechina; zita rayo rinobva muchiGiriki triptychos (tri uye… verenga zvakawanda
Unoziva sei kana uri akanaka? Edza kuti uzive kuti wakanaka here kana kuti kwete
Vanhu vazhinji vanozviona sekukosha uye vanopedza nguva yavo vachifunga nezvekuti mafungiro evamwe achave api maererano nekukwezva kwavangave, uye pane kunyange zvidzidzo zvesainzi zvine chekuita nenyaya iyi zvakapihwa kuti zvave zvakajairika. Zvinotendwa kuti kune nzira dzekuziva kana uri wakanaka, ... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei Hydraulic Arm? Guide
Hydraulics inzvimbo yefizikisi inodzidza ma mechanics emvura, zvivakwa izvi zvinoenderana nehukama pakati pehuremu uye simba rinoiswa kune zvinwiwa, pamwe nekupenya kwavo, zvichivabvumira kufambisa mitoro inorema uye mune iyo kesi. ye hydraulic maoko iyi tekinoroji… verenga zvakawanda
Kupisa kwakadzikama, kunonziwo kupisa kweshanduko, huwandu hwemuviri hunoreva kuwanda kwekupisa kunogamuchirwa kana kupihwa nemuviri apo chimiro chemuviri chinoshanduka. Latent kupisa: Pfungwa uye mhando Zvakakosha kuziva kuti, mukushandurwa uku, tembiricha inoramba yakafanana, kureva kuti, haifunge izvi ... verenga zvakawanda
Goridhe kubva pakutanga yaionekwa seimwe yemaminerari anodhura, ndosaka zvakakosha kuziva mhando uye kuti goridhe redu ndeyechokwadi sei, pane nzira dzakati wandei dzekutarisa senge ndimu, vhiniga, pakati pezvimwe, uye pano tichava ndikuratidzei mamwe acho.maumbirwo iwayo. Maitiro ekuziva kana iri Goridhe ine Paste ye… verenga zvakawanda
Hydrostatics: density, kumanikidza, kusundira uye mafomula
Hydrostatics inzvimbo yefizikisi inodzidza zvinwiwa pakuzorora. Iri bazi rinosanganisira pfungwa dzakasiyana senge density, pressure, volume uye buoyant force. Hydrostatics: Main Concepts Density Density inotemesa kuungana kwezvinhu muvhoriyamu yakapihwa. Nezve kuwanda kwemuviri uye zvinwiwa zvatinazvo: Kana iyo density ye ... verenga zvakawanda
Maitiro ekugadzira accordion yebvunzo? Nyanzvi level
Kubiridzira bvunzo kwakakura seunyanzvi hwekudzidza uye zvingadaro kuti pane imwe nguva muhupenyu hwedu hatigone kudzidza zviri muchidzidzo zvisinei nekuti tinoedza sei kana kuti tine zvakawanda zvemukati zvekudzidza uye nguva shoma yekuyeuka. izvo uye zvinouya mupfungwa dzako zvinobvunza kuti sei ... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei report? Guide
Kubva pakatanga budiriro, ruzivo rwave rwuchikosha, angave akanyorwa, anooneka kana kuti anoenderana. Nekuti kutaurirana kwagara kuchikosha kukwanisa kuita kuti humambo hukure uye huchengetedzwe kwemamwe makore akawanda pasina kubatanidzwa mukudonha kwechimbichimbi. Pane nzira dzakasiyana dzekufambisa ruzivo, dze… verenga zvakawanda
Chatroulette inzvimbo yemahara iyo inonyanya kufarirwa pakati pevashandisi vayo nekuti inokutendera kuti usangane nevanhu vatsva kunyanya kuburikidza nevhidhiyo chats, kunyangwe iwe uchigonawo kuzviita nezwi kana mameseji chat. Imwe yezvinokwezva iyo nhamba yevanhu vanobatana zuva nezuva kune webhusaiti: vanopfuura mamirioni 1,5, iyo ... verenga zvakawanda
Kuve nehickey chero kupi pamuviri kunoratidza kuti takapedza husiku hwekuda nemumwe wedu kana kuti, chiyeuchidzo chekuti isu tinodiwa uye tinoshuvira; zvisinei, ingave iyo nyaya yekuti tinoda kuratidza mumwe wavo kuita jee kana kuzadzisa kutendeuka, saka ... verenga zvakawanda
Uzivi hwemazuva ano hunotanga muzana ramakore regumi neshanu apo Nguva Yemazuvano inotanga. Inoramba iripo kusvika muzana remakore regumi nemasere nekusvika kweContemporary Age. Kubva pakuedza, huzivi hwemazuva ano hunobvunza hunhu hune hukama nevanhu, pamwe nehukama hwavo nemasikirwo. Rationalism uye empiricism zvinoratidza shanduko iyi. … verenga zvakawanda
Chii chinonakidza kupfuura ngowani? Icho chinhu chinoshandiswa zvakasiyana-siyana, chinogona kunge chiri chidimbu chepamutemo pane imwe nguva uye chimwe chinhu chinonakidza uye chisina kurongeka pane imwe, ndosaka kana tichizokuratidza maitiro ekugadzira heti inopenga mumaminitsi gumi chete, nezvinhu zvakasiyana, zvinyorwa uye. zvimiro zvekufadza zvakanyanya zvidiki uye zvakawanda ... verenga zvakawanda
Nzira yekugadzira kite?
Iyo kite, parrot kana kite, mutambo wechinyakare munyika zhinji dzeLatin America, mutambo unonakidza, uye unogona zvakare kuitwa hunyanzvi kumba, pano tichakudzidzisa kugadzira kite, nerubatsiro rwe vabereki nevana.vana. Pano tichatsanangura zvakadzama zvese zvaunoda kuziva… verenga zvakawanda
Nzira yekugadzira Plume? Magadzirirwo Ekutanga
Iyo plumes chishandiso chiri chikamu chetsika dzemarudzi ekare, kuti ishandiswe mumitambo yezvitendero zvakasiyana. Pasina kupokana, nekuda kwekupenya kwayo uye mavara, chinhu chekushongedza chakakwezva kutarisa kwemunhu wese. Nzira yekugadzira Plume? Kugadzira plume hakuna kuoma, iwe unongoda ... verenga zvakawanda
Maseti enhamba anounza pamwechete maseti akati wandei ane ma element ari manhamba. Zvinoumbwa nenhamba dzechisikigo, dzakakwana, dzine musoro, dzisina musoro, uye nhamba chaidzo. Maseti enhamba - Kupatsanura Ona maitiro emumwe nemumwe wavo, senge pfungwa, chiratidzo uye zvidiki. Seti yenhamba dzakasikwa (N) Seti yenhamba dzakasikwa. inomiririrwa naN. … verenga zvakawanda
Nzira Yekuita Sei Purogiramu Yezviitiko? Tutorial
Zvirongwa zvezviitwa zvinoshanda chaizvo graphic zviwanikwa zvekutevera kufambira mberi kwekuferefeta kana chirongwa; Izwi rinobva muchiGiriki "chronos" iro rinoreva nguva uye "giramu" iro rinoturikira seshoko rakanyorwa. Kune akati wandei marudzi uye zano nderekuti kuburikidza nekuziva kwe… verenga zvakawanda
Kana iwe uine mudiwa zvakajairika kuda kuziva kwavari, kazhinji izvi zvinogona kunetsa kune mumwe wemapato, asi kazhinji zvinogona kutoponesa hupenyu hwemunhu pakaitika tsaona. Kune vasingaverengeki vanhu vanodzoka kubva kubasa kuenda kumusoro ... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei chimiro? Ita marongerwo pasina zvikanganiso
Chimiro chinofanana nedhizaini, hurongwa, marongerwo uye zvinoreva kugoverwa kwezvinhu zvakasiyana mukati menzvimbo; Izvo zvakajairika pakuita mapurojekiti ekugadzira zvivakwa zvakaita sezvivakwa kana zvinhu zvakasiyana; Imwe yeayo hunhu hukuru ndeyekuti ivo vanoenda kupfuura kusiya basa, sezvo iwe uchivawana mu2D uye 3D. … verenga zvakawanda
Nzira yekuziva sei zuva rekuzvarwa kwemunhu?
Pane zvikonzero zvakawanda nei tichigona kuzvibvunza kuti tingaziva sei zuva rekuzvarwa kwemunhu? Kungomushamisa pazuva rake rekuzvarwa, nekuti chinhu chinodiwa kune maitiro kana kuferefeta, pakati pezvimwe zvikonzero. Chokwadi ndechekuti panguva ino ndiri kukupa mazano ekuti uwane… verenga zvakawanda
Nzira yekuita mhedziso? Matanho ekutevera
Mukati mekunyora, mhedziso chinyorwa chinoiswa kumagumo ekunyora nechinangwa chekuburitsa pachena pfungwa dzakanyanya dzechinhu chakadzidzwa, panguva imwe chete, ichipa ruzivo rwakakwana rwekupa kuvharwa kune iyo pfungwa inotevedzwa ne. kunyora. Mamiriro anofanirwa kuve nemhedzisiro ndeyekupa… verenga zvakawanda
Oxides: zvavari, kupatsanura uye mienzaniso.
Oxides: Iwo mabhinary compounds (anosanganisira maviri emakemikari elements), apo maatomu eokisijeni anobatanidzwa kune zvimwe zvinhu. Ionic oxide inoumbwa nekubatanidzwa kweokisijeni nesimbi, yatova mu molecular oxide, okisijeni zvisungo kune isiri-simbi. Mimwe mienzaniso yemaokisi ndeiyi: ngura (iron oxide… verenga zvakawanda
Zviitiko zvematter exercise
Zviitiko zvematter exercise. Hunhu hwemata hwakaiswa muuzhinji uye hune hutsanana. Izvo zvinhu zvakajairika zvakajairika kune zvese zvigadzirwa, zvisinei nebumbiro razvo, senge misa, vhoriyamu uye kusaparara. Nechekare iwo chaiwo zvivakwa ndiwo akasarudzika maitiro echinhu chakapihwa uye akaiswa se: muviri, makemikari, ... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei mhuri yemhuri? Guide
Vanhu vazhinji vanowanzoziva dzimwe hama, kazhinji ivo vepedyo asi vashoma vanonyatsoziva kuti mhuri yavo kana dzinza ravo rinobva kupi, ndosaka kana iwe uchida kuronga ruzivo urwu rwakakosha, ini ndichakuudza maitiro ekugadzira muti wedzinza. Mumafirimu unogona kuona akasiyana… verenga zvakawanda
Nzira yekuziva sei zera remunhu?
Kuverenga zera remunhu harisi basa rakaoma zvachose, asi kana iwe usina kunyatsojeka pamusoro pekuti rinoitwa sei, usanetseka, muchikamu chino zvese zvaunoda kuziva zvichatsanangurwa kwauri kuti unzwisise nzira yekuziva. zera remunhu? Vazhinji vangabvunza mubvunzo... verenga zvakawanda
Molality kana molal concentration
Molality (W) inzira yekuyera kusangana kwe solute mu solvent, ndiko kuti, huwandu hwema moles e solute aripo mu solvent. Molality, inozivikanwawo semolal concentration kana kuisa muhuwandu hwezvinhu nehukuru, inoshandiswa kana mhinduro dzine tembiricha dzakasiyana. Izvi zvinodaro nekuti yako… verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei Cantoya Balloon? Mbichana mbichana
Mabharuni eCantoya ane chiratidzo chakakosha kuvanhu uye anowanzo kusunungurwa nezvishuwo kana meseji kuenda kudenga, zvinotendwa kuti mavambo avo anobva kutsika dzeAsia, kunyangwe kuMexico anonzi cantoya mabharumu mukukudza Joaquín de la Cantolla naRico, muvaki piyona. zvemabharumu emhepo inopisa. Yake… verenga zvakawanda
Mitosis uye meiosis: pfupiso, misiyano uye maekisesaizi
mitosis uye meiosis. Mitosis inzira yekupatsanurwa kwesero inoita kuti pave nemasero maviri akaenzana nerekutanga, kureva, ane nhamba yakafanana yemakromosome. Mu meiosis, kupatsanurwa kwemasero maviri kunoitika, kuumba masero mana ane hafu yemajini esero remubereki. Maitiro ese ari maviri chikamu chedu… verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei tabloid? Mbichana mbichana
Tabloids mapepanhau ane chimiro chidiki pane chechinyakare, pakutanga aishandiswa senhau dzinonakidza, achireva vane mukurumbira, mhosva, nyaya dzezvematongerwo enyika, pakati pezvimwe; Muchokwadi, ichi ndicho chikonzero chekuti hukuru hwayo hudiki, huchiita kuti husvike muhukuru, mutengo, pamwe nekutarisa uye kuzere nemifananidzo. Kana uri… verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei motokari yemapuranga?
Kune vana, kuva nengoro dzemapuranga kwagara kuri kunakidzwa, kwakafanana netsika uye nguva dzekare, mazuva ano hazvisi zvakajairika kuti vana vatambe navo, zvisinei, vachiri sarudzo yakanaka kune avo vachiri nemukati mavo. mwana uye vanoda kuvavaka kubva pakutanga. Pamwe… verenga zvakawanda
Maitiro ekugadzira bheji kana Credential muIzwi? Fast uye nyore
Mune chero kambani kana sangano, zvitupa kana mabheji chikamu chekuzivikanwa kwevashandi uye pamwe nayo iyo yemukati sangano rekambani. Ndokusaka, kana iwe usina iyi yekuzivisa sisitimu, isu tichakuudza maitiro ekugadzira bheji kana chitupa muIzwi uye mune zvimwe zvirongwa mukati mekombuta, zvakare, ... verenga zvakawanda
Newton's Third Law, inonziwo Action and Reaction, ine chekuita nekudyidzana pakati pemiviri miviri. Kana chinhu A chichishandisa simba pane chimwe chinhu B, icho chimwe chinhu B chichashandisa simba rakafanana, kutungamira, uye nzira yakasiyana pachinhu A. Nokuti masimba anoshandiswa ku... verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei musoro mukuru? Crafts
Kune vese vanoda mabasa emaoko, tinokuunzira akati wandei akapusa nzira dzekugadzira musoro muhombe, sezvo tichiziva kuti kune vanhu vazhinji vanogona kunzwa kukurudzirwa kugadzira aya akanaka manhamba akanakira mhemberero dzakakurumbira. Tine muchinyorwa chino maitiro akasiyana ekuita basa iri, senge… verenga zvakawanda
zvinhu zviri nyore uye zvakasanganiswa
Zviri nyore uye zvakasanganiswa zvinhu. Zvinhu zviri nyore zvinoumbwa nechinhu chimwe chemakemikari; nepo paine maviri kana anopfuura maelementi muchimiro, zvinhu zvacho zviri makomboni. Kudzidza kwekuora kwemakemikari kuita kwakakosha mukuvandudzwa kwekemikari, sezvo yaibvumira kurongwa kwezvinhu. Zvinhu zviri nyore uye... verenga zvakawanda
Maitiro ekufona kuUnited States kubva kuPeru?
Kuita kufona kwepasirese kunogona kuita senge nzira inoomesera, kunyanya nekuti tinotya nekuti iyo nhamba yefoni inogona kutarisa kwenguva yakareba sei pachiratidziri, zvisinei, muchinyorwa chino iwe uchaziva nenzira iri nyore inogoneka Maitiro ekufona kuUnited. States kubva kuPeru. Mukuwedzera, iwe unozoziva nzira yekufona nhamba yekunze kubva… verenga zvakawanda
Nzira yekuita sei faira?
Iyo faira idhizaini kana chaiyo yeruzivo sangano sisitimu, iyi ruzivo inorairwa uye yakarongedzwa zvinoenderana neimwe chirevo, kuitira kuti ichengetedze uye kufambisa kuwanikwa kwairi painodiwa. Pane nzira dzakawanda dzekugadzira mafaera, kana iwe uchida chero, isu tinokuratidza maitiro ekugadzira faira… verenga zvakawanda
Normal simba: mafomula, kuverenga uye maekisesaizi
Normal force (Fno), inonziwo "support force", imhando yesimba rekubata rinoitwa nemuviri pasi pevhu. Semuenzaniso, isu tinogona kufunga nezve block yakazorora patafura apo ese ari maviri anoshandisa simba rinotsigira kune mumwe nemumwe, perpendicular kune yekuonana nzvimbo. Normal Force - Chii chiri… verenga zvakawanda
Nzira yekugadzira Eva Rubber Hat?
Kugadzira ngowani panguva ipi zvayo yegore kunogona kuva basa rinonakidza uye rakanyatsogadzirisa, shandisa zviduku zviduku mumba kuti ugovere chirongwa ichi chitsva navo, chengetedza zviduku zvakabatikana uye kugadzira zvakanakisisa EVA rubber hats. Eva rabha chinhu chakanyanya nyore kushandisa, chinonamira ... verenga zvakawanda
Nzira yekugadzira Pinwheel? Mirayiridzo
Pinwheel chimedu chekushongedza, chinogadzirwa nemablades anofamba nemhepo uye anoshandiswa zvakanyanya kumagadheni kana sechinhu chakakosha kumunhu. Iwo anonziwo pinwheels, pinwheels, renglets kana reguiletes, iwo akagadzirwa kubva kune akawanda zvinhu uye anowanzo kuve ane akawanda mavara. Tevere, iwe… verenga zvakawanda
Nzira yekuziva sei kana Transport Pass yapera? Zvese zvaunoda kuziva
Kupfuura kwekufambisa ndiyo mhinduro maererano nemubhadharo webasa rekufambisa veruzhinji, iro, murudzi rweSpain, zvakajairika kuti vanhu vatore nguva yekufambisa, zvisinei, vanogona kurasikirwa nehuwandu hwayo hwakakodzera. kusvika kunguva refu yavakarongerwa, kana iri… verenga zvakawanda
Huwandu hwekufamba: neakagadziriswa maekisesaizi
Momentum, inonziwo linear momentum, huwandu hwevector hunotsanangurwa sechigadzirwa chehuremu hwemuviri nguva dzekumhanya kwayo. Momentum - Conservation Principle Iyo dhairekitori yemutsara wemutsara inopihwa negwara revelocity. Zvinosimbiswa kuti huwandu hwekufamba hunochengetedzwa, uye izvi ... verenga zvakawanda
15 Best Wallapop Alternatives
Wallapop iri pano kuti igare, iyi app kubvira 2013 yave imwe yenzvimbo dzinodiwa dzevanoda zvimedu zvechipiri, kungave kutenga kana kutengesa; kuishandisa kuri nyore kwazvo uye chimwe chezvinonyanya kusiyanisa ficha ndechekuti unogona kutsvaga zvigadzirwa nenzvimbo. Sistimu yako ye… verenga zvakawanda
Peji1 Peji2 ... Peji67 Zvadaro →
Kukosha kwezvipfuyo muAdopt Yangu 2022
Sei More TV isingashande paTV yangu?
Maitiro ekuraira kubva kuTaobao kuenda kuRussia uri wega
Maitiro ekushandura app yeTaobao muchiRussia pa Android uye iPhone
Chinja nharembozha yako kuita rekodha
Zvimwe Zvinonyanya Kukosha Technology;
Ungaziva sei kuti mumwe wako ari kupi?
Nzira yekuziva kuti ndiani ane nhamba yefoni?
Nzira yekuziva sei yangu Facebook email?
Nzira yekuita sei invoice?
Nzira yekugadzira chitubu chekusimudzira?
15 dzakanakisa dzimwe nzira dzegrindr
Curiosities kugadzirisa sei Doc dzidzo Mirayiridzo Crafts MaPC ekutanga pc mhinduro Michina Maitiro uye Zvinodiwa Uncategorized upenyu
© 2022 OneHowToHacer.com Kodzero dzese dzakachengetwa.